Amapompo ama-Multi-Stage ama-Centrifugal Amapompo Abavelisi kunye nabathengi - iinkampani zaseChina - iShimge Pump Industry Group Co., Ltd
Ikhaya > Iimveliso > Iipompo ze-Multi-Stage Centrifugal
Oku kulandelayo malunga neePompo ze-Multi-Stage Centrifugal ezinxulumene ne-Blt, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde ngakumbi iipompo ze-Multi-Stage Centrifugal.
I-motor standard ye-high-efficiency, i-Japan NSK i-bear kunye ne-cold-rolled 50ww800 ye-silicon sheet sheet yenza ipompo ephezulu, ingxolo ephantsi kunye ne-maintenance-free. Isalathisi esivalwe ngokupheleleyo, i-IP55 ibakala lokukhusela, i-class class isolation, i-special & quot; i-lock-lock & quot; ukuqhubela ukuphela kwethamo kwenza umpu uphelele ukuxinzelela kwe-inlet.
Isalathisi esilungeleleneyo se-container shaft kunye nazo zonke iinxalenye ezidibeneyo, akukho ukujikeleza kwe-axial ukukhusela i-shaft kunye neenxalenye ze-rubber ekugqokeni, kunye neempawu zokutshintsha ngokukhawuleza, ukufakwa lula kunye nokukhuseleka kokusebenza.Ukutywinwa kwe-dynamic kwenziwa kwintsimbi ye-carbide kunye ne-static Ukutywinwa ngumbonakalo werubha wentsholongwane owenza isitywina sokumelana nokushisa okuphezulu, ubomi besikhathi eside, ukuguqulwa lula kunye nezinye iimpawu ezibalulekileyo.
Ukuveliswa yiyona ndlela ephakamileyo ye-laser welding teknoloji, akukho shishini lokususa, ukuqinisekisa ukuphakama okukhulu kunye nokusebenza kakuhle. I-teknoloji yokucubungula: ukuchaneka ngokuchanekileyo, i-CNC lathe, i-CNC yokupakisha isikhungo, ubugcisa be-modern technology njengolwazi lwe-laser welding kunye nezixhobo zokucubungula.2T-4T ukuxutywa kwebala, i-16T nangaphezulu i-welding laser.
Ingxowano yokutyikitya ejikelezayo yokupakisha yomzimba wepom yomzimba unganciphisa ukuvuza kwangaphakathi okuveliswe ngumxinano ohlukeneyo kunye nokuthintela ukusetyenziswa kwamandla xa utywala lubuyela kwiqela lompu.
Iipompi eziphambili zenzelwe ukuba zidibanise i-nut, i-nut closing lock, inkqubo yecandelo le-interlock ye-interlock, ukunciphisa isikhala phakathi kwendiza nganye kwizinga, ukuphucula ukusebenza kakuhle kwendawo yokugcina amanzi, nokuqinisekisa ukuzinza, ukunyaniseka nokusebenza kakuhle iipompo eziphambili.
I-extrusion ye-spline shaft enekhwalithi ephezulu yomhlaba, ukuchaneka kokuchonga okuphezulu, ngexesha elifanayo ukuphucula iipropati ezicwangcisiweyo zomthi kunye nokuthembeka kwepompo.
BL (T) uchungechunge lwentsimbi engenasinxibe yamanqanaba epompofugal (emva koko kuthiwa ipompo) ibonisa iimpawu zokusebenza kakuhle, isandi esincinane, ukusebenza ngokuqhubekayo, njl njl. Isetyenzi sepompa samukela isakhiwo esingazimeliyo sakhiwo esinezithuba ezininzi, esenza i-compact epheleleyo, ukufakwa kwayo kulula, ukusetyenziswa kwayo nokugcinwa kokulungeleka.
Ubushushu obuphakathi: uhlobo oluqhelekileyo: 0â "ƒ ~ 68â" ƒ uhlobo lwamanzi ashushu: 0â "ƒ ~ 120â" ƒï¼Œ
Ukushisa okubi: + 40â "ƒ,
Uxinzelelo olunzulu lwama Max: 1.0MPa,
Kucetyiswa ukusebenzisa imoto yamandla aphakamileyo xa imeko okanye ubuninzi be-viscosity of medium engaphezu kwamanzi.
PH: 5 ukuya ku-8
Ukucoca nokudluliselwa kwimisebenzi yamanzi
Ukusasazwa kwimisebenzi yamanzi
Ukunyanzeliswa kokuxhaswa kwamandla
Ukunyusa uxinzelelo ekukhuleni okuphezulu, amahotele, njl.
Ukunyusa uxinzelelo kumanzi wamashishini
Ukucwangcisa iinkqubo zamanzi
Ukuhlamba nokucoca iinkqubo
Izithuthi zokuhlamba iimoto
Iinkqubo zokulwa nomlilo
Iinkqubo zokupholisa kunye ne-air conditioning systems (refrigerants)
Ukutya kweebilisi kunye neenkqubo zokuxhoma
Izixhobo zamashishini (i-lubricant lubricants)
Ioli kunye notywala
Glycol kunye nezipholizo
Iinkqubo zokucoca i-Ultra
Iinkqubo zokususa i-osmosis
Ukucwenga, ionizing, ukuchithwa kwezinto ngokutsha
Inkcenkceshelo yokunkcenkceshela (izikhukhula)
I-efihliweyo epheleleyo kunye nefuthe i-motor standard pole
Ikhusi lokukhusela: IP55
Umgangatho ophezulu Isigaba esisodwa Isigaba 220V-50Hz Isigaba sesithathu: 380 / 400V-50Hz
I-Standard Efficiency Energy (IEC60034)
Ukubalwa Kwangaphantsi kwe-Inlet Pressure
Ukuba uxinzelelo lwepom luphantsi kunomlinganiselo wempuphu ephakathi, kuya kubakho i-cavitation, echaphazela ukusebenza kompompo. Ukuze ugweme i-cavitation kwaye uqinisekise ukuba i-pump inlet inexinzelelo elincinci, inhloko enkulu yokunyuka kufuneka ibalwe njengale ilandelayo:
I-Pb: Uxinzelelo lwe-atmospheric, ibha (Kwi-system yepayipi esondeleyo, inokuqwalaselwa njengengcinezelo yenkqubo);
I-NPSH: Intsholongwane enomdla ngokuchanekileyo, m (Inani kwixabiso lomthamo we-Q-NPSH);
I-Hf: Ukulahleka komgca wokulahlekelwa kombhobho (ukuxabisa kwimizila ephezulu yepipeline);
I-Hv: Uxinzelelo oluphambene nomphunga, m (Uxinzelelo oluphambene nomphunga ojikelezayo olufanelekileyo, umthombo ongagqibekanga ngamanzi, njengoko kuboniswe kumfanekiso4 ngakwesokudla);
Hs: Umda wokukhusela, m, ixabiso eliqhelekileyo ngu-0.5.
Isiphumo sokubala: Ukuba i-H imnandi, ipompo ifakwe ngendlela echanekileyo, ngaphandle koko, ifakwe kwi-downdraft indlela.
Qaphela: Akukho imfuneko yokwenza ngaphezu kokubala phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Kuphela xa sisebenzisa ipom kwiimeko ezilandelayo kufuneka sibale i-H:
1. Iqondo lokushisa eliphakathi liphezulu;
2.Isantya sokuhamba sikhulu kunexabiso elilinganisiweyo;
3. Intloko yokukhupha ibhulu okanye ipayipi ye-inlet yinde;
4. Ucinezelo lwenkqubo luyingcosana;
Ukukhethwa kwamapompu kufuneka kusekelwe kwi:
Idatha yemida efana nokulahleka kwengcinezelo njengento eyahlukileyo yokungafani kwemilinganiselo, ukulahlekelwa ngothintelo kwi-pipework,
Iphumpu efanelekileyo njl
Amacwecwe okucwangcisa ukutywinwa kwamashishini ngokuqhelekileyo
1. Umsebenzi wepompo:
Ukusuka kwinqanaba lomsebenzi kunokwenzeka ukuba ukhethe ipom ngesiseko seengcatshulwa zekharityhulam eziboniswe kwi & quot; ukusebenza / ubugcisa & quot; idatha.
Xa ukucima umpompo oku kulandelayo kufuneka kuthathwe kwi-accounting: â € ¢ Ukuhamba okufunekayo kunye noxinzelelo kwindawo yokucima. • Ukulahlekelwa ngumxinzelelo ngenxa yokungafani kwemilinganiselo. • Ukulahleka komfutho kwi-pipework (Hf). Umzekeliso.1) Kungenzeka.â € ¢ Ulungelelwaniso olugqithiseleyo kwinqanaba lomsebenzi oqikelelwayo. • Ixabiso leNPSH. • Ukubala kwexabiso le-NPSH, bona iseshati ehambelana neengcingo.
3. Iphulo lokusebenza:
Ngaphambi kokuqulunqa iphuzu elifanelekileyo lokusebenza kakuhle, ukusetyenziswa kwepompo kufuneka kuchongwe. Ukuba umpompo ulindeleke ukuba usebenze njengendawo yokusebenza efanayo, ukhethe i-pump pump esebenza kwindawo efanelekileyo ehambelana nokusebenza kakuhle kompompo.
Njengoko umpompo ubukhulu becala ngokusuka komlinganiselo ophezulu, kubalulekile ukuba uhlale unelungelo lomsebenzi kwi-curve esebenzayo (eta) ukwenzela ukuba ugcine umgangatho ophezulu xa ukugeleza kwehla.
4. Iipompo eziphathekayo:
Ukukhethwa koxhumo lwepom kuxhomekeke kwixinzelelo olulinganisiweyo nomsebenzi wepayipi. umpompo unikeza uluhlu oluninzi lwe-ftexible uxhumano olunjenge:
5. Iitafile zokucwangcisa ukutywinwa ngokucwangcisiweyo
Field Field Uhlobo lwe-Shaft seal I-Shaft seal impahla
Eziqhelekileyo Ezizodwa 1 2 3
Inxalenye ejikelezayo Ikhowudi Icandelo elithunyelweyo Ikhowudi Elastomers Ikhowudi Umthombo wokunyanzelisa Collor Ikhowudi
0â "ƒ ukuya + 90â" ƒ amanzi ahlambulukileyo â- IGraphite A SiC S FPM F SUS304 C ASFC
0â "ƒ ukuya + 90â" ƒ amanzi ahlambulukileyo â- i-WC W IGraphite A FPM F SUS304 C WAFC
+ 90â "ƒ ukuya ku-120â" ƒ ukuxhatshazwa komzimba â- SiC S SiC S EPDM E SUS304 C SSEC
ukuya ku-0â "ƒ â- i-WC W i-WC W EPDM E SUS304 C WWEC
Uhlobo lwesityikityo soxinzelelo Ipomode yomzekelo d1 d2 h
NDA I-BW (J) 2/4 12.7 16 32
Imida yoxinzelelo kunye nobushushu iboniswa kulo mkhiwane olandelayo, uxinzelelo kunye nobushushu kufuneka buboniswe kumkhiwane. 4.
Ubungakanani bokushisa obushushu
Xa ipompo isebenza kwindawo apho izinga lokushisa eliphezulu liphezulu kunama-40â "ƒ okanye iphakamileyo liphezulu kunama-1000m, amandla okuphuma kwe-motor P2 aya kuhla ngenxa yokuphoyisa okubangelwa kukunqongophala komoya. Ngoko ke, apho kufuneka ixhotyiswe nge-motor-power.
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 2
Kunconywa ukuba kusetyenziswe ngaphakathi kwinqanaba lokuphakamisa.
I-Curve yokuSebenza-BL (T) 4
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 8
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 12
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 16
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 20
I-Curve yokuSebenza - BL (T) 32
I-Curve yokuSebenza-BL (T) 45
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 64
PN25-40 / DN100 i-flange ejwayelekile, ngesicelo.
I-Curve yokuSebenza - BL (T) 90
I-Curve yeNtsebenzo-BL (T) 120
I-Curve yokuSebenza - BL (T) 150
Ubungakanani bokuPakisha ubukhulu
Iifayile ezishisayo: Amapompo ase-Multi-Stage e-Centrifugal, i-Multi-Stage Strifugal Ipomps umenzi, i-Multi-Stage Stage Centrifugal Amapompo umthengisi, amaPompo ama-Multi-Stage ama-Centrifugal athengiswayo, e-China Amaphampu ama-Multi-Stage ama-Centrifugal Amapompo, ama-Multi-Stage Centrifugal amaphampu amaqela, Amapompo ase-Multi-Stage Centrifugal, Amapompo ama-Multi-Stage ama-Centrifugal amanani, athenge iipompo ze-Multi-Stage Centrifugal
Iipompo ze-Centrifugal eziqhelekileyo ze-Multi-Stage "BL
Iipompo eziphantsi kweMististâ € "QDY-K2